Mmetụta ihe omimi 7 SEO Strategies N'ihi na ndị na-elekọta ahụike
Nyocha Ịchọ Nchọpụta (SEO) na-eme ka e jide n'aka na saịtị gị nwere ike ịchọta mgbeonye na - aza ajụjụ na nyocha ọchụchọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ọrụ weebụ na-achọ onye mgbasa ozi na mpaghara Boston, ma n'ebe ahụbụ ọtụtụ podiatrists na mpaghara ahụ, doro anya, ịchọrọ ka omume gị pụta dị ka nhọrọ mbụ na nsonaazụ ọchụchọ.
Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara ,Jason Adler na-enye usoro aghụghọ SEO asaa iji mee ka ụlọ ọrụ gị bụrụ ihe na-asọ mpi na ngalaba ahụ ikeenyere gị aka ịkwado elu na nsonaazụ ọchụchọ.
1. Họrọ Right Right
Mee ndepụta ndepụta zuru ezu, nke ị chere na ndị mmadụ ga-ehichapụmgbe ị na-achọ ụlọ ọrụ nlekọta ahụike na ọrụ. Mgbe ha chịkọtara ndepụta nke okwu ọchụchọ, nyochaa irè ha site na ijiNchịkọta Ihe Atụ nke Google - pc network setup service. Nnwale ahụ ga-egosi na okwu ndị a nwere okporo ụzọ nchọpụta dị ịrịba ama kwa ọnwa, ma na ịsọ asọ ntakịrịsite na saịtị ndị ọzọ.
2. Na-emepụta ihe gị na data: Meta Descriptions and Title Tags
Keywords emejuputara na SEO aka gi kwesiri idi na metadatanke ọ bụla na peeji nke na na isi ọdịnaya nke gị na saịtị. The metadata nwere HTML meta na mkpado chọtara n'etiti mmechi na-emeghe isimkpado na HTML cypher nke faịlụ. Meta data enyere engine engine aka ịchọpụta ihe otu peeji nke dị na ya mgbe a na-aghọta mkpado ahadị ka aha nke ibe.
3..Mepụta Ndepụta Ọdịnaya nke Plagiarism
Mepụta ihe pụrụ iche maka saịtị gị na nnọchite nlekọta ahụike gị iji jide n'akana ọ na-apụta ma na-enye gị nkwụsị ọgụ na ntaneti. Ịgwa ndị na-ege gị ntị site n'inweta ahịa ahịa dị mma na-eme ka o kwe omumeigosi gị nka na uru na n'ikpeazụ, nweta ogo na search engine.
4. Gbaa mbọ hụ na I Nwere Map n'Ịntanet
Ịmepụta saịtị saịtị dị mfe bụ mgbe a na-eme ka ị ghara ịbanyesaịtị na engines ọchụchọ. Map ahụ na-enye Yahoo, Bing na ọbụna Google aka ịghọta otu esi ahazi ma jikọọ na saịtị gị.
5. Nwere uzo di iche iche di iche iche
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọkachamara ahụike na-efu ohere ịnweta ọkwa dị elu site na iji slideshows,vidiyo, ihe oyiyi na ụdị mmekọrịta ndị ọzọ. Dejupụta ebe nrụọrụ weebụ gị na ọdịnaya kachasị dị mma ma rite uru site na iji ụdị dị iche ichenke nyocha ihu.
6. Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Ihe karịrị ọkara nke ọchụchọ a na-egbu site na iji ngwaọrụ mkpanaaka. Obodonyocha bụ ntanetị isi maka usoro nlekọta ahụike ebe ọ bụ na ndị ọrịa ga-eleta ọnọdụ nke ebe ndị a tupu hajiri ọrụ ha.
7. Jiri saịtị dị iche iche mee ka ọ dị mma
Usoro mgbasa ozi na-eme ka okporo ụzọ gị gaa na saịtị gị ma rụọ ọrụ ụzọ abụọmmekọrịta dị n'etiti mmadụ na otu nzukọ. Ebe nrụọrụ weebụ na-emetụta SEO n'ime ihe njikọụlọ na ọdịnaya aka.
Na-enwe obi abụọ banyere mkpa SEO dị n'ọrụ gị? Ugbu a karịa pasent 55nke ndị okenye na America nwere smartphones, nke na-egosi otú o si dị mkpa ịkwado elu na nsonaazụ ọchụchọ ndị nwere ike ịnweachọ site na ngwaọrụ ha nakwa site na desktọọpụ PC's. Imezu omume ndị a kwuru n'elu, ị ga-amụba na ntanetịịbịara omume gị ma ruo ndị ahịa ọhụrụ.